Ciidamada Soomaaliya iyo Mareekanka oo Howlgal ka fuliyay Sh.Dhaxe,iyo Xubno Al-Shabaab oo nolol lagu qabtay. | Weheliye Online
Ciidamada Soomaaliya iyo Mareekanka oo Howlgal ka fuliyay Sh.Dhaxe,iyo Xubno Al-Shabaab oo nolol lagu qabtay.
Ciidamada dowlada fadaraalka ee Soomaaliya oo kaa shanaya dhigooda Mareekanka oo markii magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano Africom ayaa howlgal wada jir ah oo iskugu jira Dagaal iyo Duqeymo toos ah ka fuliyay xalay deegaano hoos yimaado dagmada Balcad ee Gobolka Sh. Dhaxe.
Howlgalkaan oo ku bilowday Duqeymo cirka ah oo ay fuliyeen diyaadaha Mareekanka ayaa lala eegtay deegaanka Basra iyi Daniga oo hoos taga Dagmada Balcad, waxaana lagu soo waramayaa in la dilay ku dhawaada 25 ka tirsan Al-Shabaab, Halka lagu dhaawacay 15 xubnood, Laguna qabtay Ragg ay ka mid yihiin Ajaanib ka Barbar dagaalamayay Al-Shabaab.
Odowaay Yusuf Raage Taliyaha ciidamada Xooga ayaa sheegay in howlgalo saacado qaatay lagu dilay hor-joogayaa ka tirsan Al-Shabaab una qaabilsanaay deegaanada u dhaxeeya Af-gooye iyo Balcad,sidoo kalana la burburiyay saldhigyo ay ku sugnaayeen Al-Shabaab.
Sidoo kale warbaahinta Dowlada ayaa shaacisay in fadhiisimo kooxda Al-shabab lagu burburiyay howlgalka , lana sii daayay maxaabiis u xirnaay al-shabaab,sidoo kale ciidamada Dowlada ayaa gacanta ku dhigay tiro maleeshiyaad ah iyo Horjoogayaashoodii.
Ma jiro warar madax baan oo laga helayo howlgalkaan oo ah midkii ugu dambeeyay oo ay wada fuliyaan Ciidamada xooga iyo Africom .
Previous articleMadaxweynaha Maamulka Jubbaland oo maanta ku soo wajahan Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay ee doorashada!.
Next articleDEG-DEG:-Jugta madaafiic laga Maqlay Muqdisho iyo xerada xalane oo la sheegay in lagu beegsaday,wararkii ugu dambeeyay.